LADM - Dị ka Modelkpụrụ Pụrụ Iche nke Ngalaba Nchịkwa Ala - Colombia - Geofumadas
August, 2016 cadastre, Apụta, My egeomates
Nchịkọta nke ngosi ahụ nke Golgi Alvarez na Kaspar Eggenberger mere na Andean Geomatics Congress na Bogotá, na June 2016.
Achọ maka Nchịkọta Multipurpose
Site na mmejuputa atumatu mmepe mba 2014 - 2018 na okike nke National Agency of Land ANT, ihe ndi ozo maka ala na Colombia agbanweela nke oma ma tinye ihe ndi ozo maka iwue iwu ndi ozo dika ha di. :
Ikparita uka nke cadastre na ndi ozo nke ike gaa n'uwa,
Ogbugbu nke nguzobe na mmezi nke cadastral.
Iji nweta nkwenye nke ozi mbu na ọdụ data nke Cadastre na Registry,
Usoro nkwado nke Ụlọ Ọrụ na Ngalaba Colombia, nke Òtù Switzerland na-akwado (SECO), kwadoro usoro dị iche iche metụtara iwu obodo, gụnyere nkwado maka iwu nke nchịkwa n'ala n'okpuru ICDE, nkwado maka nhazi na nhazi nke ụlọ ọrụ IGAC banyere ọrụ ọhụrụ ya dịka ikike nwe obodo, nkwenye nke iwu Cadastre-edebanye aha, ndụmọdụ maka usoro nkọwa nke geodetic ma kwado maka mmezu ọhụụ nke Cadastre Multipurpose.
Dika ihe ohuru ohuru n'ime usoro iwu na teknụzụ, akwadora International Standard Management Management nke a na-akpọ ISO-19152; Amaara m LADM (Domaindị Ngalaba Nchịkwa Ala). Ngwakọta nke ọkọlọtọ a na-enye ohere itule n'etiti nrụgide nke teknụzụ na-eweta na ọchịchọ maka ọrụ nke ụmụ amaala n'okwu gbasara njikwa mpaghara n'okpuru usoro jikọrọ ọnụ.
Ka ọ dị ugbu a, e wulitewo ụdị mbụ nke usoro LADM, gbanwee maka iwu Colombia nke na-agụnye nhazi nke ma ọ dịkarịa ala:
Ndị nwere mmasị, bụrụ ìgwè ndị a, ndị mmadụ n'otu n'otu, ụlọ ọrụ iwu na ụlọ ọrụ ọha na eze jikọtara na nchịkọta nke nlekọta nke ikike ala,
Ngalaba nhazi nke na-anọchite anya ihe dị iche iche dị iche iche nke mpaghara, ma nke nzuzo ma nke ọha.
Ndepụta ikike, ibu ọrụ na mmachibido nke dị n'etiti ihe onwunwe mpaghara na ihe ndị e debara aha na Ndenye aha.
Nkeji oghere na njirimara ha, nke na-adị na ozi nke cadastral ugbu a na, nke a ga-ebulite na pilot Multipurpose Cadastre pilot ga-egbu n'oge na-adịghị anya.
Nkuchi nke LADM gụnyekwara nkwado maka Colombian Spatial Data Infrastructure (ICDE), site na okike Land Administration Node, nke ga-abụ ihe ndabere maka mmekọrịta nke ihe ndị emere na isi. Nke nta nke nta, ụlọ ọrụ dị iche iche ga-agbanwe LADM na usoro ha, na-ekwe nkwa nrụtụ aka pụrụ iche nke ngwongwo, ikike, ndị mmadụ na ụtụ isi nke mejupụtara igwe nke National Land Management System nke Colombia.
BỤGHỊ ime ya
Otu n'ime akụrụngwa nke eji eme ihe maka LADM bụ INTERLIS. Nke a bụ asụsụ pụrụ iche maka nkọwa nke ụdị data data ala, nke nwere usoro mbufe yana usoro ngwaọrụ nke enwere ike nweta nkwado, mwekota, njikwa azụmahịa na mmelite nke ozi site na usoro mmekọrịta mmekọrịta.
Azụlitewo ọzụzụ n'oge na-adịbeghị anya maka ndị nyocha nke ụlọ ọrụ dị iche iche jikọtara na Project, na iji INTERLIS maka nhazi, na nsụgharị nke ụkpụrụ Colombia nke LADM ka e mepụtara n'asụsụ a.
Ndị ọrụ ụgbọelu na-achịkwa Ụtọ
Ihe oru ngo a na akwado Agustín Codazzi Geographical Institute (IGAC) na National Registry Superintendency (SNR), na iwu nke ihe nlere, uzo oru na usoro maka mmepe nke Multipurpose Cadastre Pilots. Nke a na-agụnye ntinye nke nchekwa maka nchekwa nke data cadastral na ndekọ; ya na ngwa ngwanrọ n'efu nke na-akwado owuwu, edezi na mbipụta data, yana ngwaọrụ maka nkwado nke data sitere na mpụga mpụga.
Tụkwasị na nke ahụ, a ga-akwadebe ihe eji emepụta ihe na arụ ọrụ maka ọrụ dị iche iche nke usoro ubi na ụlọ ọrụ nke nyochaa ihe onwunwe.
Site na nguzobe usoro nke profaịlụ Colombia nke LADM, nke akowara na INTERLIS, ndi oru nkwekorita ga-enwe ihe di mkpa iji kwadebe ma nyefee ozi anakọtara n'ọhịa dịka ụkpụrụ ọkọlọtọ edepụtara na mbụ nke ọkọlọtọ ISO 19152. IGAC na SNR ga-enwe ngwaọrụ maka nyocha, njikwa na nchekwa nke ozi na akwụkwọ nke nsonaazụ pilot, iji mepụta ihe mmụta. ma melite usoro maka ịtụle ngwaahịa nke nyocha cadastral.
Enwetakwu ihe ọmụma banyere Project na http://www.proadmintierra.info/
Previous Post«Previous Ntinye LADM iji INTERLIS - Colombia
Next Post Bentley Systems ọkwa finalists maka mmụọ nsọ 2016Next »